Hitachi ZX690LCR-7 & Masinina Mahery - Sumo Dozer an'ny Komatu | FANASITRANA ACE
Hitachi ZX690LCR-7 & Masinina Extreme - Sumo Dozer an'i Komatu
Hitachi ZX690LCR-7 & Masinina Mahery - Sumo Dozer an'i Komatu
Amin'ny famolavolana excavator sy ny milina fananganana dia mihamaro hatrany ny vokatra sahaza ny toe-javatra samihafa, ary ireto ny vaovao farany momba ilay milina avy amin'ny Earthmovers
Eoghan Daly dia mitsidika izay inoana fa ny Dash 7 voalohany an'ny Hitachi Construction's 690LCR excavator tonga hanompo any Eropa, miasa ao amin'ny Live Work Grow ao amin'ny tranokalan'ny Central Park any Dublin.
Ny milina volomboasary mamirapiratra dia an'ny Shannon Valley Group ary mandeha amin'ny motera Stage 5 izay mamokatra 348kW sy torkia 2.050Nm amin'ny 1,300rpm. Mitentina 71,7 taonina amin'ny volavolan-dalàna momba ny fitrandrahana betsaka, ny 690LCR dia naneho ny fahombiazany tamin'ny famotehana granite henjana niaraka tamin'ny Rammer C130 sy Epiroc hydraulic hammer.
Nilaza tamin'i Eoghan i Tom Reilly, mpihetsiketsika efa ela, “Masinina ho an'ny mpandraharaha foana i Hitachis ary mbola tsara kokoa noho izany ity Dash 7 vaovao ity. Toy ny mahazatra, dia manana lamina fifehezana tena tsara izy io ary malefaka ihany koa amin'ny levers. ”
Vakio bebe kokoa momba ny fiasan'ny Hitachi ZX690LCR-7 sy ny hetsika Dublin an'i Shannon ao amin'ny Earthmovers Magazine.
Masinina mahery - Komatu's Sumo Dozer
Ao amin'ny laharana Novambra 2020 an'ny EARTHMOVERS MAGAZINE (natomboka tamin'ny 2 Oktobra), David Wylie dia nandinika ny kinova farany indrindra an'ny Komatsu Europe's 112-taonina D475A-8, dozer lehibe indrindra manerantany, miasa ao amin'ny kariera Narva any Estonia.
Mba hahatongavana any, ity masinina manokana ity dia naterina tao amin'ny orinasa Osats any Komatsu amina faritra maromaro mankany amin'ny seranan'i Zeebrugge any Belzika. Ireo singa ireo dia nitaingina kamiao 2.300km tamin'ny kamiao ho any amin'ny mpivarotra ao Komatsu's Baltem As any Estonia, izay niangonany tao amin'ilay atrikasa teny an-toerana.
Ny kinova Dash 8 an'ny D475A dia ampiasain'ny motera Stage 5 mamokatra 934hp amin'ny paosotra mandroso sy 1.040hp any aoriana. Miaraka amin'ny lelany U mitongilana roa sy ripper goavambe, milanja 115 taonina ny andiany sary eto!